काठमाडौं –प्रगतिशील विचार लेखनमा खगेन्द्र संग्रौला परिचित नाम हो । सरकारका कार्यशैलीविरुद्ध उनी सधै आलोचनात्मक लेख्छन् ।
सत्ताविरुद्ध जहिले पनि आलोचनात्मक हुने संग्रौलाको लेखनशैली, सरकारका पछिल्ला गतिविधि र देशको राजनीतिक घटनाक्रमबारे लोकान्तर शोका लागि दिलनिशानी मगरले कुरा गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध किन आक्रामक ? प्रचण्डको चुनाव प्रचारमा हिँडेको मानिस किन प्रचण्डको विरोधमा हिँडेको ? नाकाबन्दीको समयमा सीमामा गएर सडकमा किन बसेको ? मदिरा सेवन गरेर लेख्ने गरेकोजस्ता खरा प्रश्नमा खगेन्द्र संग्रौलाको जवाफ सुन्न हेर्नुहोस् भिडियो :-